Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa ugu Baaqay Mucaaradka inay Noqdaan Mucaarad wax Dhisaya oo aysan Noqon Mucaarad Dalka Baabi’inaya. – STAR FM SOMALIA
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa ugu baaqay dowlada federalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka inay ka wada shaqeeyaan cadaalada iyo horumarka si looga baxa dhibaatada xilligan ka jirta Soomaaliya.
Wareysi uu siiyay idaacada VOA laanteda Afka Soomaaliga ayuu Cabdiqaasim Salaad Xasan ku sheegay in xilligan aan loo baahneyn in laga shaqeeyo burbur ku yimaada dalka Soomaaliya.
“Dowlada waxaa mucaaradad uga iman kara baarlamaanka ama Aqalka Sare balse waxaa la rabaa mucaarad xaq ah wax fiican ku hadlaya,”ayuu yiri Cabdiqaasim Salaad Xasan.
“Dowladu dadkeeda hala tashato,dadkeeda ha xurmeyso dadkuna dowlada ha xurmeeyo.” ayuu sii raaciyay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
Cabdiqaasim Salaad Xasan Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay mucaaradka inay noqdaan mucaarad wax dhisaya oo aysan noqon mucaarad dalka baabi’inaya dowladana ridaya.
Hadalka Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa ku soo beegmaya xilli dowlada Soomaaliya ay la kulmeyso mucaaradad ugaga imanaya siyaasiyiin ku jira labada gole iyo kuwo kale oo aan ka mid ahaynba.